FJKM Ankadifotsy Ny vokatsoa azo avy amin’ny « jus de noni » / Hainao ve / Autres / Accueil - FJKM Ankadifotsy
Ny vokatsoa azo avy amin’ny « jus de noni »25/09/2015 07:13
Anisan’ny voankazo efa hita betsaka eny an-tsena eto amintsika amin’izao fotoana zao ny «Noni »
Ny vokatsoa azo avy amin’ny « jus de noni »
Anisan’ny voankazo efa hita betsaka eny an-tsena eto amintsika amin’izao fotoana zao ny «Noni ». Raha any Tahiti no niatombohan’ny fihinanana azy ity dia tamin’ny taona 1995 vao tena nalaza ary nisandrahaka maneran-tany ny fihinanana azy. Any Tahiti no tena betsaka maniry izy ity ary ny mponina tao ihany koa no nahita voalohany fa azo atao fanampin-tsakafo mitondra hery sy tanjaka ny « Noni ». Ampahafantarany anao ato anatin’ity lohahevitra ity ary ireo vokatsoa entin’ny «Noni ».
Betsaka tokoa ny vokatsoa azo amin’ny fisotroana ny “jus de noni” raha tsy hilaza afa-tsy ny areti-tenda, ny fivalanana, manadamina ny tosi-drà miakatra, manamafy ny hery fiarovana, mandamina ny fadim-bolana mikorontana, manasitrana ny rhumatisme ary voalaza koa fa manasitrana homamiadana izy.
Hatreto aloha rah any any ivelany dia tsy mbola nisy ny fikarohana nampiseho mazava fa tena manasitrana tanteraka ny “jus de noni”, fa naira-niaiky kosa ireo manam-pahaizana rehetra fa tena fanampin-tsakafa tena mitondra vokatsoa eo amin’ny fahasalaman’ny olona ity “noni” ity.
Ahoana ary ny fikarakarana azy, somary mahery fofona izay ity ity raha efa nanandrana nikarakara azy isika. Raha tsy mahatanty izay fofona izay isika dia efa misy mivarotra efa vita ao anaty tavoahangy izy ireny.
Ho an’izay mahatanty ny fofona ary te hikarakara izany any an-tokantrano dia toy izao no hatao. Mividiana noni 5 isa eo; sasao tsara ary tetho ary alao ny voniny. Alefaso ao anaty “mixer” ary ampio tantely sahabo ho 6 sotro lehibe eo mba hanalefaka ny tsirony sy ny fofony. Rehefa potika tsara dia tatavano ary alefaso ao anaty tavoahangy.
Toy izao ny fihinanana azy: mihinana iray sotro lehibe iray isan’andro isa-maraina mialohan’ny sakafo mandritra ny 20 andro; mijanona kely mandritra ny 10 andro dia miverina mihinana indray mandritra ny 20 andro manaraka.
Tandremo tsara fa amin’ny maha karazana fanafody azy dia mila manontany hevitry ny mpitsabo anao aloha ianao vao manaraka ity torohevitra ity.
Dia mirary fahasalamana ho anao hatrany.